Andiyihlawuli irhafu. Ungayithintela njani irhafu yokuthengisa kwi-odolo yam? - DataNumen
Sisebenzisa MyCommerce.com kwaye Ukukhawulezisa.com ukuphatha imicimbi yethu kwi-Intanethi.
Ukuba uya-odola ngeMyCommerce.com, kuya kufuneka uhlawule irhafu yokuthengisa kwiodolo yakho kuqala. Emva kokuvunywa komyalelo, thumela uxwebhu lwakho lwesatifikethi sokungahlawuliswa rhafu okanye i-VAT esebenzayo okanye i-ID ye-GST kuthi, emva koko siya kuyibuyisela kuwe irhafu.
Ukuba uya-odola ngeFastSpring.com, emva koko unako thintela iirhafu ekubeni ziqokelelwe kwi-odolo yakho ngokubonelela ngeVAT yakho esebenzayo okanye isazisi se-GST ngexesha lokuthenga. Indawo ye-VAT okanye ye-GST ID inokuthi okanye ingafumaneki ngokusekwe kwilizwe lakho. Amazwe avela eMelika awanayo intsimi ye-VAT / GST ID kuba ayisebenzi:
Amazwe asuka eYurophu okanye e-Asiya aya kuba nentsimi ye-VAT / GST ID, njengezantsi:
Ungacofa "Faka i-ID ye-VAD" okanye ufake i-ID ye-GST "ukufaka i-VAT / GST ID yakho ngokufanelekileyo.Ukuba uyalibala ukufaka i-VAT / GST ID yakho kwi-odolo yakho, okanye unesatifikethi sokungahlawulisi rhafu, emva koko unoku-odola ngerhafu yentengiso. Kwaye emva kokuba ulwamkelo luvunyiwe, Qhagamshelana nathi ukubuyisela irhafu.
kuthenga, GST, umyalelo, thenga, irhafu yomthengis, Ikhululwe irhafu, VAT
Kwenzeka ntoni emva kokuba ndithumele iodolo?Uyasinika isaphulelo kwezemfundo?